आजको राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २४ गते मंगलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर १० तारिख - Nepal Insider
Home/राशिफल/आजको राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २४ गते मंगलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर १० तारिख
मेष– कुनै पनि काम गर्दा इज्जत प्रतिष्ठाको ख्याल राखेर गर्नु होला । आफ्ना काम भन्दा बाहिरी काम बढि हुनेछन् तर काम गरेर जश कम मिल्नेछ । लाभदायक यात्राको योग देखिन्छ । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । आस्था र विश्वास बढ्नेछ ।
वृष– समयले साथ दिने छैन । आशक्ति पन बढ्नेछ । काम गर्दा विचार पु¥याउन सकिएन भने रित्तो हात फर्कनु पर्ला । परिवारमा समस्या बढ्न सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । विश्वास र भरोसामा काम गर्न सकिने छैन । वेइमानको हातमा धन पर्न सक्छ सतर्क रहनुहोला । स्वास्थ्यमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।
मिथुन– स्पष्ट बोल्दा आफैलाई घाटा हुनसक्छ विचार पु¥याउनु होला । कुरा भन्दा काममा बढि ध्यान दिनुहोला । दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ काम अनुसारको दाम हातमा पर्नेछ । देखिने शत्रु भन्दा नदेखिएका शत्रु बढि हुनेछन्,सतर्क भई काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ ।
सिंह– दुविधा मुक्त भएर कार्य क्षेत्रमा हात हाल्नु होला । समयमा निर्णय लिन सकिएन भने आफुले लिने ठाँउ अरुले लिनेछन् । व्यापार व्यवसायमा सन्तोषजनक प्रगति हुने छैन । उच्चमनोबलका साथ काममा लाग्नु होला थोरै सफलता मिल्नेछ । आफन्तबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ । अरुको भर परेर काम नगर्नु होला ।
कन्या– प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला । शरीरि एवं मानसिक दूर्वलता बढ्नेछ । घरमा समस्या बढ्ने छन् । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । गरेका काम विवादित हुने छन् । आफुमा भएको उर्जाको सदुपयोग गर्न सकिने छैन । व्यापारमा गिरावट आउनेछ । विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन । भौतिक सम्पति नास हुनसक्छ ।
तुला– सामान्यतया ग्रह गोचर आज अनुकुल नै देखिन्छ मान्य जनको सुझाव सल्लाहमा काम गर्दा राम्रै हुनेछ । आफ्नै प्रयत्नबाट पनि धेरै काम हुनेछन् अर्थोपाजन हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रो हुनेछ । साथि भाई इष्टमित्रबाट सहयोग प्राप्त होला । भ्रमलाई चिरेर काम गर्नु होला । घरमा भन्दा वाहिर बढि आनन्द मिल्नेछ ।
वृश्चिक– ऋण लगानी नगर्नु होला डुब्न सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । आफन्तबाट नै विश्वास घात हुन सक्छ । कहि कतैबाट भाग्य खोस्ने प्रयत्न हुनसक्छ सतर्क भएर काम गर्नु होला । आर्थिक संरचना नचलाई कार्य योजना अगाडि बढाउनु होला । मान्य जनको आशिर्वाद मिल्नेछ ।
धनु– कामलाई निरन्तरता दिनु होला ,प्रयत्न गरे काम बन्ने छन् । मनोरञ्जनात्मक काममा खर्च ज्यादा हुनेछ । अरुको भर नपर्नु होला । वित्तिय कारोवारमा सानातिना समस्या देखिने छन् । भोज भतेरको निम्तो आउन सक्छ । स्पष्ट बोल्दा घाटा हुनेछ । कार्य गोपनियता अप्नाएर काम गर्नु होला । धन दिने काम नगर्नु होला ।
मकर– काम गर्ने विश्वासिलो बातावरण अझै बन्ने छैन । पारिवारिक समस्या बढ्नेछन् । व्यर्थका काममा समय खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । स्वास्थ्यले पनि साथ दिने छैन । फजुल खर्च र झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ ।
कुम्भ– हिजो विरोध गर्ने आज मित्र बनेर आउने छन् । आफन्तका कारण लाभान्वित हुनुहुनेछ । काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होला समयमा गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । आम्दानीका नयाँ क्षेत्र देखिने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै होला । शत्रु पराजित हुनेछन् । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ ।
मिन– गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । सक्रियताले सफलताको शिखर चढन पाईनेछ । कुटनैतिक विधि अप्नाएर काम गर्न सके राम्रै उपलब्धि हात लाग्नेछ । सहज र सरल विधिबाट कार्य योजना अगाडि बढाउन सकिनेछ । आफ्नै पहलमा धेरै काममको टुङ्गो लाग्नेछ । सहयोगी मित्र भेटिने छन । काम गरेर धन कमाउने योग देखिन्छ । परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ
ज्यान जाला छविराजसँग कहिल्यै सँगै बस्न सक्दिन : शिल्पा
ओभरफ्लो हुन थालेपछि कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोलियो मोदीलाई तनाव बिहारमा भागाभाग (भिडियो हेर्नुहोस)